16 | June | 2007 | Layma's World
Posted on June 16, 2007 by layma
” There are heavy raindrop above my head , in fact , they are snow . I deem my blood circulation will be halted because of the cold. I am not able to see the light. Where’s the sun ? The rays from the sun is my only expectation for my warmth. I want the voice of my wife , my sons and my daughters. I can do nothing for them , for country and for all. Am Iauseless person for my people ? Ooh!!! Whatadifficult life to survive !!! “
Dark isasymbol of loneliness…….. Dark isasign of fear…….. Sometimes, it also represents the failure…….. For the one who face with the feeling of fear, loneliness, failure and breakdown of communication, these days may be the darkest days for him……..
No one can live alone except the saintly person……Everybody needs his own family and community…….
The breakdown of communication is an inhumane punishment for him…….
P.s I wrote this one by suffering something from the poem ” Maezartaung chay” written by the ancient poet, adviser “Latwaethonedaya “.
လေးမတို့နိုင်ငံမှာ မျက်စိပွင့် နားပွင့် ဖြစ်လာကြပြီ…..။ International School တွေလဲ ဟိုမှာ ဒီမှာ အပြိုင်အဆိုင်…..။ တတ်နိုင်တဲ့ မိဘတွေအတွက် မြန်မာကျောင်းထားမလား….international school ထားမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းက တော်တော် ဦးနှောက်စားစေတယ်….. ။ International School ထားရင် ကလေးကို လက်လွတ်လိုက်ရမယ်….မြန်မာကျောင်းထားရင် ကိုယ့်ကလေး ခေတ်နောက်ကျမယ်…..ဒီလိုတွေး ကြတယ်……။ နောက်ဆုံးတော့ ကလေးအတွက် ဦးစားပေးပြီး ရှိသမျှရင်းပြီး international school ထားလိုက်ကြတယ်……မြန်မာကျောင်းမှာတော့ အတန်းယူထားတာပေါ့…ညှိပြီးတော့လေ…..။ တချို့ ကျောင်း တွေမှာ မြန်မာစာကို နည်းနည်းသင်ပေးသေးတယ်…..တချို့ က လုံးဝ မသင်ဘူး……။ အဲဒီ ကလေးတွေ အတွက် မိဘတွေမှာ မြန်မာစာကို အိမ်မှာဆရာခေါ် ပြီး သင်ပေးကြ ရပြန်တယ်…..။ အင်္ဂလိပ်စာကို အရင်သင်လိုက်ရတဲ့ ကလေးက မြန်မာစာကို မသင်ချင်ဘူး……။ မြန်မာစာကခက်တာကိုး…..။ မူကြို ကို ဘိုကျောင်းထားပြီး ကျောင်းကြီးအပ်တော့ မြန်မာကျောင်း အပ်တဲ့ မိဘတွေ ဆို ပိုတောင် စိတ်ညစ်ရသေး……။ ကလေးက ဘယ်လိုမှ မပျော်တော့ဘူးလေ…..။ ငယ်ငယ်လေးနဲ့အင်္ဂလိပ်လို ပြောနိုင် ရေးနိုင်တာ ၀မ်းသာ စရာပါ…..။ ဒါပေမယ့် ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်မလာအောင် မိဘတွေက ဂရုပြုသင့်ပါတယ်……။မြန်မာစာ မြန်မာ စကားကို အထင်မကြီးသော…..မြန်မာစာ မဖတ်တတ်သော….( ရွှေသွေးတွင် ရေးထားသော တာ့တာ ကို အသံမထွက်တတ်သော ၈နှစ်သားနှင့် ဆုံဖူးလို့ ပါ) ၊ ဘုရားရှိခိုး သင်၍ မရသော (ဣတိပိတော ဘဂ yellow ဟုမှတ်ထား ရသော ကလေးလည်း ရှိသည်) …….မရှိသော……မသိသော…..နားမလည်သော မြန်မာကလေးများ မဖြစ်စေချင်ပါ…..။ ကလေးသူငယ်များ၏ ဘ၀ အရေးကို ခဏအတွေးလေးနဲ့မဆုံးဖြတ် ကြစေချင်ပါ……..။ ။
Filed under: That's what I wanna say |	5 Comments »